Xaafii abbaatti deebisuuf qabsoo eegalame - BBC News Afaan Oromoo
Mootummaan bakki argama xaafii Itoophiyaa osoo ta'e jiru dhaabbata Nezarlaand biyyoota Awurooppaa shanitti mirga abbummaa galmeessise mana murtii ijibbaataa idila-addunyaatti himachuuf akka ta'e beeksiseera.
Mootummaan kan kana gochuuf yaadees waldhabde uumame furuuf yaaluus milkaa'uu waan hin dandenyeefi.
Bara 2004 Institiyuutiin qabeenya uumamaa Itoophiyaa fi Insititiyuutiin qorannoo qonnaa dhaabbata Nezaerlaand 'Health and Performance Food International (HPFI)' waliin waligaltee taasise.
Akka qorannoo tokko tokkootti beekumsa oomishaa fi abbummaan sanyii xaafii oomishtoota Itoophiyaaf tahee akka itti fufu walii galticha irra taa'eera.
Ta'us kaampaaniin kun waligaltee Itoophiyaa waliin qabu addaan kutuun abbaa qabeenyummaa xaafii biyya Nezarlaand, Xaaliyaanii, Ingilizii, Xaaliyaan, Oostiriyaa fi Jarman keessatti fudhate.
Booda garuu kasaaraa keessa galuusaa beeksisuun mirga abbaa qabeenyummaa xaafii kanaa dhaabbata biraa 'Vennootschap Onder Firma(VOF)' jedhamuuf dabarse.
Milkaa'uu dhabuu kanas guyyoota muraasaan dura ministirri Saayinsiifi Teekinoloojii obbo Geetaahun Makuriyaa mana maree bakka bu'oota uummataaf ibsanii ture.
Dhaddachi eessa ta'a?
Haa ta'u malee, Afrikaatti gorsituun Mana Murtii Ijibbaata Addunyaa Liyyuu Taammiruu mootummaan dhimmi kana karaa mana murtiin xumuruu yoo barbaade waan lama hubachuu qabu jechuun dubbatti.
Inni tokko kaampaaniin Itoophiyaa waliin waligaltee mallatteesse hojii dhaabuu isaati jechuun himti. Dhaabbata cufamee fi hinjirre himachuun rakkoo guddaa ta'u himti.
Kanaafuu, dhaabbata kanatti iyyachuun barbaachaasisaa akka ta'e himti.
Hagam irra-aanuun danda'ama?
Akkatti mootummaan himata banu wanti beekamu jiraachuu baatus dhimmi kana irratti waan sadii jiru jedhan yunivarsitii Finfinnetti barsiisaa seeraa kan ta'an Dr. Biruuk Haayilee.
Akka waligalteetti kaffaltin Nezerlaand Itoophiyaaf kanfaluu dhabuu isaa, abbummaa bu'aa xaafii qopheessuu irratti argameefi abbummaa dhaabatichi sanyii xaafi haaraa irraa argatedha.
''Akkitii xaafiin qophaa'u beekumsa duruu biyyatti keessa ture ta'u isaa mirkaneessuun isa dhaabbatichi qophii midhaan xaafii irratti abbummaa argate irra-aanuun danda'ama,'' jedhaniiru.
Haa ta'u malee, sanyii Itoophiyaa irraa fudhatan irraa sanyii haaraa argatan irratti garuu milkaa'uu dhabuu dandeenya jedhu.
''Sababni isaas akka seera Awuroppaatti qorannoodhaan sanyii haaraa argaman eegumsi hin taasifamuufi waan jedhu hinjiru.''
Mana maree daldalaa Finfinneetti daarektarri dhaabbata mana murtii ijibbaataa Obbo Yohaannis W/Gabri'el Itoophiyaan abbummaa deebifachuu abdii hinqabdu jedhu.
Sababni isaan kaa'an kan kaanirraa adda.
'Himata guddaa fi waldhahaa dhiisaati, dhimmi kan biraayyuu abbaa alanagaa hordofu hinjirretti kuni waan ta'u hin dandeenye,'' jechuun himu.
Yeroo baay'ee abbumma adhabuun rakkoo kan seenu dhaabbilee barnootaa osoo hintaane dhababilee dhuunfaafi miti-mootummaa waliin gaafa waligalteen raawwatedha jedhaniiru.
Laatiin Ameerikaan 'jiddugala haaraa weerara koronaavaayirasii' taate
Lidataatti jiraattonni ganda tokkoo fedhaan adda of baasan
Keeniyaan yaalii talaallii Covid-19f namoota 400 barbaadaa jirti
Dhaabbatni dhuunfaa ‘SpaceX’ yeroo jalqabaaf xiyyaar-samii hawaatti erguufi
Biyya jaalalleewwan sababa Covid-19'n adda bahaniif daangaa bante
Dargaggoota moosaajii dhukkuba biqiltootaa himu kalaqan
Du'a nama gurraacha poolisiin mormarra ejjeteen duuba poolisoonni afur ari'aman
Tuuniziyaatti namootni jaha Iida irratti alkoolii falame dhugan du'an